LEGO ကိုချက်ချင်းတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း ၇ ချက် Star Wars အကွောငျး
LEGO တိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းခုနစ်ခု Star Wars
08 / 01 / 2021 21 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 1935 Views စာ0မှတ်ချက် 10212 မှာ Imperial လွန်း, Chewbacca, Dartဇ Vader, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego Star Wars, သေးသေးလေး, Star Wars, မုန်တိုင်း, X- တောင်ပံ, Y- တောင်ပံ
အဆိုပါ Lego Star Wars အဓိကအကြောင်းအရာသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းကရှည်လျားသောလမ်းသို့ရောက်သော်လည်းတိုးတက်ရန်နေရာများရှိနေသေးသည်။ Brick Fanatics ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်နှင့်ပြန်လည်စဉ်းစားရန်နည်းလမ်း (၇) ခုကိုဖော်ပြထားသည် Lego ဝေးနဂါးငွေ့တန်း။
a နှိုင်းယှဉ် Lego Star Wars 1999 မှတစ်ခုနှင့်အတူယနေ့သို့မဟုတ် set မှ minifigure D ကိုအကြားပထမ ဦး ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံး lightsaber duels နှိုင်းယှဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏artဇ Vader နှင့် Obi-Wan Kenobi ။ အချိန်၏နည်းပညာအကန့်အသတ်များကြောင့်ရရှိသောအောင်မြင်မှုအတွက်မူရင်းကိုသင်နားလည်နိုင်သည်၊ သို့သော်ခေတ်သစ်မူကွဲသည်အဆင့်တိုင်းနီးပါးတွင်အလင်းရောင်အနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။
၎င်းသည်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကိုတာဝန်ခံသည်ဟုမဆိုလိုပါ Lego Star Wars ဆောင်ပုဒ်သော်လည်းကျေနပ်ရသင့်ပါတယ်။ ၂၀ ရာစုဘိုးဘေးများဘေးမှယနေ့ပြုလုပ်သောအရာများနှင့်အသေးစားပုံသဏ္mindာန်များသည်စိတ်ကိုကြည်နူးဖွယ်ကောင်းစေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသေးသည်။ ခုနစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။
7 - Taller minifigures
အဆိုပါ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစဉ်အလာအသေးစားရုပ်ပုံများကိုအမြင့်ပေ (သို့) ခြေထောက်များထက် ကျော်လွန်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သောအခွင့်အလမ်းရှိကြောင်းအခိုင်အမာသက်သေပြပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ လှိုင်းတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအလယ်အလတ်အရွယ်ခြေထောက်များသည်ဆယ်ကျော်သက်ဇာတ်ကောင်များအတွက် ၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောအိမ်တအိမ်ဖြစ်သည် articulated - ခြေလက်အင်္ဂါ။
Lego Star Wars အလားတူအခွင့်အလမ်းကိုစကေး၏အခြားအဆုံးမှာတွေ့ရမယ်။ D လိုဇာတ်ကောင်တွေarth Vader နှင့် Chewbacca တို့သည်သူတို့၏တစ်ခေတ်တည်းသားများပေါ်ရှိဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပိုမိုရှည်လျားသည်။ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေရန်ခြေထောက်များရှည်ရန်လိုသည်။ ငါတို့ဟာ Toy Story's Woody လောက်အစွန်းရောက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့နဲ့ပုံမှန်ခြေထောက်တွေကြားကတစ်ခုခုကကောင်းလိမ့်မယ်။
၆ - လက်တွေ့ကျသောဝတ်လုံများ
အဆိုပါ Lego Group တွင် ၀ တ်စုံများကိုကိုယ်စားပြုရန်အတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားခဲ့သည် Star Wars အခင်းအကျင်း, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းပြန်သွားပြီ classic တ ဦး တည်းအရွယ်အစား - ကိုက်ညီ - အားလုံးထည်အငူ။ အသေးအဖွဲဓာတ်ပုံများကိုအဝတ်အစားများအပြည့်အစုံပုံနှိပ်ခြင်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Ben Kenobi အတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သော်လည်းသူ၏ခြေထောက်များကိုကိုက်ညီသောအရောင်ညံ့ဖျင်းခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားလိုချင်စရာဖြစ်စေခဲ့သည် Lego Group မှရှင်းရှင်းလင်းလင်း, သူ့ထံသို့ပြန်သွားရန်, သဘောတူညီခဲ့သည် classic 2019 ခုနှစ်တွင်အံဒီဇိုင်း။
ကျနော်တို့တကယ်မြင်ချင်တာကတော့ minifigure တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ်အင်္ကျီအသစ်များဖြစ်သည် ဒီတစ်ခု။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကစားနိုင်မှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့် articulation ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပြသမှုတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် - သင်ကစားရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဝတ်ရုံကိုအမြဲတမ်းဖယ်နိုင်သည်။
5 - အရောင်သစ်များ
အဆိုပါ Lego Group ၏လက်ရှိအရောင်အဆင်းသည်တော်တော်လေးပြည့်စုံသည်artအရောင်အရိပ်သက်ဆိုင်ရာရှိရာ icularly ။ ကျနော်တို့အနီရောင်, ဘလူး, အစိမ်းရောင်, အဝါရောင်, ပန်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်အများကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော်မီးခိုးရောင်ရိပ်နှစ်မျိုးသာရှိသေးသည်၊ Lego Star Wars ဤမျှလောက်များစွာသောအစုံဟာ drab သေံအပေါ်အလွန်အားကိုးဘယ်မှာဆောင်ပုဒ်။
ကျနော်တို့ဒီမှာမီးခိုးရောင်အရိပ် ၅၀ မတောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်တတိယ (သို့) စတုတ္ထမျိုးကတောင်မှအစုစုကိုမတူကွဲပြားခြင်းအတွက်အံ့သြစရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီးအနည်းငယ်ပိုပြီးမျက်နှာပြင်တိကျမှုပေးနိုင်သည်။ အဖြူသည်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနေရသော X-wing နှင့် Y-wing များ၏ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်လောက်အောင်တောက်ပနေသော်လည်းမီးခိုးရောင်သည်၎င်းကိုမဖြတ်နိုင်ပါ။ နှစ်ခုနှင့်အကြားအသစ်သောအသံသည်ပြီးပြည့်စုံသွားလိမ့်မည်။ လက်ရှိအလင်းနှင့်အမှောင်မီးခိုးရောင်များအကြားနောက်ထပ်အရောင်သည်အဓိကအားဖြင့်အသေးစိတ်အတွက်သာမက Clone Turbo Tank သို့မဟုတ် AT-TE ကဲ့သို့သောယာဉ်များအတွက်ဖြစ်သည်။
4 - Droid ဒီဇိုင်း
လက်ရှိတိုက်ပွဲ Droid ဒီဇိုင်းသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစ၍ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါ။ မှန်ပါသည်၊ ပို၍ အထူးတိကျသောပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လက်နက်အသစ်များကိုပိုမိုတိကျသော blaster ရိုင်ဖယ်များကိုကိုင်ထားနိုင်သော်လည်းခေါင်း၊ ကိုယ်ထည်နှင့်ခြေထောက်များရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်က Billund ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သောသူများနှင့်တူညီကြသည်။
ဒီမှာဒီဇိုင်းသမားတွေကိုဒီစက်ကိုထပ်မံတီထွင်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ခြေထောက်တွေကိုသီးခြားလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စစ်တိုက်စစ်ဆင်ရေးတွေကြည့်ချင်တယ်။ ထိုစက်ရုပ်လက်များသည်မည်မျှချို့ယွင်းချက်ရှိသနည်းဆိုသည့်အချက်ကိုသေချာစဉ်းစားရလိမ့်မည်။ သို့သော် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပြီးပြည့်စုံခဲ့သောလက်ရှိအထွေထွေ Grievous ဒီဇိုင်းကဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုသက်သေပြသည်။ (ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာရောက်နေတုန်းမှာ R2010-D2 ကလည်ပတ်နေတဲ့ခေါင်းနဲ့နောက်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ကျိန်းသေရပ်နေမှာပါ။ )
3 - ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိပါကမပြင်ပါနှင့်
စစ်ပွဲ droids တိုင်းမဟုတ်, update ကိုမှအကျိုးလိမ့်မယ်နေစဉ် Lego Star Wars မှိုစဉ်ဆက်မပြတ် Tinkering လိုအပ်သည်။ ဥပမာ - Stormtrooper သံခမောက်ကိုယူပါ Lego Group သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ပုံသဏ္dualာန်နှစ်မျိုးဖြင့်ပုံဖော်ခြင်းသည် 2014 ခုနှစ်တွင်မြင်ကွင်းသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီကအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံသွင်းပုံကိုငြင်းရန်ခက်ခဲသည်artသံခမောက်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းထက် ပို၍ စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ သို့သော်ယင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြissueနာဖြစ်သည်။ မေးစေ့ကအရမ်းနိမ့်ပြီးထိုင်လျက်သံခမောက်များကိုမလှည့်နိုင်အောင်တားဆီးထားပါတယ် မိသားစု Guy Stormtroopers။ အဆိုပါ Lego တစ်ချိန်တည်းမှာမိတ်ဆက်ပေးသည့်သူပုန်လေယာဉ်မှူးခမောက်များသည်တချိန်တည်းတွင်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Group မှ ၀ န်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်နေ့တွင် Stormtrooper helmets သို့ပြန်သွားရန်မျှော်လင့်နေသည်။
၂ - ပုံမှန်ပြန်လည်ပြissuesနာများ
အဆိုပါ Lego Star Wars ဆောင်ပုဒ်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းမလူစိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ရှိပါသည် classic နှင့်အရောင်းရဆုံးနှင့်အတူ - အရူးရူးငွေပမာဏကိုသွားကြောင်းပြင်းထန်စွာ underrepresents Star Wars တီဗီရှိုးများရောက်ရှိရန်သတ်မှတ် Disney+ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဘယ်ဒီဇိုင်းပြန်မလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာက၊ ၂၀၂၀ ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီပြproblemနာအတွက်အဖြေပေးခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလက Lego Ideas စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည် လာမယ့်အပေါ်မဲပေးပရိသတ်တွေတောင်းဆိုနေတာ Lego Star Wars UCS အစုံ The သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ထွက်အနိုင်ရနှင့်ရောက်ရှိဖို့ကောလာဟလဖြစ်ပါတယ် ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဒီမိုကရေစီပုံစံကိုယူပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ခြင်းအယူအဆကိုကျင့်သုံးရန်အဆိုပြုထားသည် - နှစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည် Lego အုပ်စုသည်အငြိမ်းစားများစာရင်းကိုဆွဲယူသည် Star Wars စတိုးဆိုင်များတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပြေးနိုင်သည့်အတွက်မည်သူကိုမဲပေးရမည်ကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်အခင်းအကျင်းတစ်ခုလုံးကိုဝေငှခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ထုတ်လွှတ်မှုတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည် classic နောက်ထပ်ဘဝအငှားချထားသည် (နှင့်ထိုပြင်းထန်သောစျေးကွက်ထဲမှစျေးနှုန်းများကိုတိုက်ဖျက်ရေး) ။
1 - Force Ghost minifigures
ရင်ဆိုင်ကြရအောင်။ အနာဂတ်မှာသူတို့စာရင်းထဲမှာဒီဟာမရှိဘူး Lego Star Wars စုံ? Force Ghost အသေးအမွှားတွေရိုက်ပြီးနောက်မှာသူတို့တွေပေါ်လာတယ် Lego Star Warsဖြေ။ ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေအားလုံးကတောက်ပနေပြီးအပြာရောင်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်မည်သည့်အခါမျှပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ခဏတာဖြစ်ပုံရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအပိုင်းအစများအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်အတူတကွချိတ်ဆက်သောအခါပွတ်တိုက်မှုပြcausesနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းက၊ Lego Group သည်ယင်း၏ပွင့်လင်းမြင်သာသောအပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုသည့်ပုံသေနည်းကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။ ဒြပ်စင်အသစ်များသည် ပို၍ တိမ်လာသည် (နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်မြင်နိုင်သည် အသစ်နှင့်အဟောင်း lightsaber ဓါးသွား), အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဓာတုမိတ်ကပ်အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအပိုင်းအစများအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးပြီး၊ Lego အင်အားကြီးဝိညာဉ် Minifigures? ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်သာ။
ယခုအဘို့, နောက်ဆုံးပေါ်အသုတ်အတွက်လုပ်ကြ Lego Star Wars အစုံ - အပါအဝင် Tatooine အပေါ် 75299 ပြTroနာ နှင့် 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ် - ကူး ဦး တည်ခြင်းဖြင့် LEGO.com။ သငျသညျသောအလုပျကိုထောကျပံ့နိုင်ပါတယ် Brick Fanatics ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပြီးသူတို့ကိုအမိန့်အားဖြင့်ပါဘူး တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Ideas 21318 သစ်ပင်အိမ်ယခုအနည်းငယ်အစောပိုင်းရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်
LEGO NINJAGO အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဝတ်အစားလိုင်းမကြာမီလာတော့မည်လား။ →